अचम्मका "कान्छादाइ" : मगर कान्छा (जितबहादुर पुन ) - जलजला अनलाईन
जलजला अनलाईनप्रकाशित मिति: २०७८ अषाढ १०, बिहिबार (११ महिना अघि)
३९७४ पटक पढिएको
ओहो मेरो दाइ ! सन्चै हुनुहुन्छ ? कहिले आउनु भयो ? २०७१ सालको पुषमा बेनीको कालिपुलमा एक युवाले हात जोडेर अभिबादन गरे ।बोल्ने शैली ठ्याक्कै मेरै गाउँका मगरहरुको जस्तो थियो त्यसैले मैले मेरै गाउँ तिरको हुनुपर्छ भन्ने अड्कल काटिहालें । तर ठ्याक्कै यहि मान्छे हो भनेर ठम्याउन सकिन । उनले आफैले थाहा पाएछन् क्यारे मैले चिन्न नसकेको त्यसैले “दाइ मलाई चिन्न सक्नु भएन र ? म जित पुन डाँडाकटेरिको …”। अनि मैले उनको हात च्याप्पै समाते “माफगर भाइ धेरै भयो नदेखेको त्यसैले अलि अलमल परें” जित भाइले भने “हो त दाइ धेरै वर्ष पछी भेट्दा अलमलिनु स्वाभाविकै हो ।” किनकि म करिव ८ वर्ष जति बाहिर बसेर आएको थिएँ । कुराकानी कै क्रममा मैले सोधें “आज भोलि के गर्दै छौ त भाइ ?” उनले भने “दाइ केहि छैन, कैले उकालो कहिले ओरालो यस्तै छ, मलाई कमाउन र रमाउन मन छैन दाइ।” कस्तो गजब्बको उत्तर त्यसपछिका दिनमा भेटघाट भइरहने मान्छे, त्यसो त मैले मात्रै हैन धेरैले उनलाई देखीरहन्छन,जित पुन भाइलाइ ।
“जित बहादुर पुन” यो नाम भन्दा धेरैले नाचिन्न सक्छन तर “कान्छा दाइ” अथवा मगर कान्छा भनेपछी धेरैले चिन्छन् उनलाई । जितबहादुर पुनलाइ उनि भन्दा उमेर ढल्केकाहरुले पनि कान्छा दाइ नै भन्दछन । उनको बोल्ने शैली नरम छ, केटाकेटी गुच्चा खेलेको ठाउमा पनि उनिहरु संगै रमाइरहेका भेटिन्छन । लौरी टेकेर हिड्ने बुढाबुढीहरु संग पनि गहकिला कुरा गरिरहेका भेटिन्छन । युवाको त उनि प्रिय नै भइहाले ।
साबिकको लेकफाँट गाबिस वडा नम्बर ८ र हालको जलजला गाउँपालिकावडा नम्बर ५ डाँडाकटेरिमा बाबा गमबहादुर पुन आमा पुर्णिमाया पुनको कोखबाट जन्मेका ३७ बर्षीय जित बहादुर पुन मगर कान्छा/ कान्छा दाइ बिगत १३ वर्ष देखि घरपरिवार आफ्नो व्यक्तिगत धन्दा भन्दा पनि गाउँको लागि भागदौड गरिरहेका छन् । जित पुन/”कान्छा दाइ” जहाँपनि भेटिन्छन, दुखमा साथ दिन मलामी देखि सलामी दिने कार्यक्रम, बिबाह, ब्रतबन्ध, अर्म -पर्म सबै ठाउमा पुग्ने निस्वार्थी र गजब्बको मान्छे कान्छा दाइ । यो कोरोना महामारीको समयमा त झन धेरैको घर दैलोमा पुगेकाछन् उनि । कसैलाई आवश्यक पर्ने औषधि ल्याइदिने, बिरामी अशक्तलाइ बोकेर अस्पताल सम्म पुर्याउने देखि बाढी पहिरोमा परेकाको उद्दार गर्न कहिँ कतै छुट्दैनन । उनि कुनै राजनैतिक दलमा आबद्द छन् तर पनि उनि भन्छन “दाइ राजनीति त आस्था हो कसैको सेवा र गाउँको बिकासको लागी राजनीति गौण हो । ”
“मानिसका काम गर्ने आ-आफ्नै तरिका हुन्छन तर मलाइ काम गरेर चर्चा कमाउनु छैन, काम गर्दा आनन्द लाग्छ त्यसैले १३ वर्ष देखि निरन्तर यसरी खट्न सकेजति, गर्न सकेजति गरेको छु उनी भन्छन । ” बिबाह नगर्ने भन्ने मेरो प्रश्नमा उनि भाबुक हुदै भन्छन” यसरी काम गर्दागर्दै आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद नै पाइएन दाइ ।”
नामको पछी नलाग्ने, कुनै जाती सम्प्रदाय र वर्गको लागी नभएर केवल मानव हित र गाउँको हितको लागी काम गरिरहने अनौठो ब्यक्ती मगर कान्छा दाइ धेरैको प्रेरणाको श्रोत हुन् । बर्तमान समयमा आफ्नो फाइदाको लागी सामाजिक कार्यकर्ता बन्ने गरेका धेरै भेटिन्छन तर मगर कान्छा कुनै राजनैतिक दलसंग आवद्द भएर पनि गाउँको लागी उनि कहिल्यै राजनीतिलाई अगाडी सार्ने छैन भन्छन । उनि भन्छन राजनीति मेरो आस्था हो तर सेवा मेरो धर्म हो । मगर कान्छालाई यसरी नै सामाजिक कार्यमा लागेको र युवालाई उत्प्रेरित गरेको देखीरहन पाइयोस ।